Umzi-mveliso weeglavu zeRubber zeLatex |China Latex Rubber Rubber iiglavu Abavelisi, Supplies
Intuthuzelo ephinda isetyenziswe ngaManzi iLatex yasekhaya yokuhlambela iiglavu zeRubha
Ipateni ephuculweyo yokubamba ivumela ukuphathwa ngokukhuselekileyo kwezona zinto zibuthathaka kwaye zilungele ukuhlamba izitya, ukucocwa kwemoto, ukucocwa kwe-oveni kunye neminye imisebenzi emininzi yasekhaya.
Ukuhlamba izitya zaseKhaya eziSetyenzwa kwakhona eziCoca iiglavu zerabha yerabha, Iglovu yeKhitshi engatyibilikiyo
IZINTO EZIPHAKAMILEYO: Ezi glavu zelatex zenziwe ngerabha ethambileyo, engenabala kwaye ayinavumba.
Iigloves zeeRubha zokuhlambela izitya zokuCoca iigloves zeKitchen ezingatyibilikiyo
KHUSELA ISANDLA SAKHO: Ezi glavu ziyakwenza ukuba kube lula kuwe ukuba uhlanjwe ngesandla izitya ezingezizo i-dishwasher zikhuselekile.
Iigloves zeRubber-Latex Ikhitshi yaSimahla yokuCoca iiglavu zasezindlwini zokuhlamba izitya ezingangeni manzi Enkulu
Phatha i-anti-skid treatemt ekhuselekileyo, Isixhobo singqindilili kwaye siqinile.
Iiglavu zokucoca irabha ekhitshini Iglove yokuhlamba izitya kunye nelaphu lokucoca
Ixesha elide:Sebenzisa iRubha ekumgangatho oPhezulu,Isiqinisekiso sinokusetyenziswa kwakhona,Vumela izandla zakho zikhuselwe emsebenzini,Iiglavu zeelastiki zilungele uninzi lweentende zezandla,Iiglavu kuyilo lwamasuntswana onyusa ukungqubana, ukukubonelela ngokubamba okungcono.
Umvelisi wehoyile ephindiweyo iLatex yasekhaya Ikhitshi leeglavu zokuhlamba izitya ezingangeni ngamanzi
Umgangatho ogqwesileyo: Sebenzisa iiglavu zasekhaya ezikumgangatho ophezulu ukukhusela izandla zakho emsebenzini, ubomi benkonzo ende ukuqinisekisa ukuhlala ixesha elide, ukuthintela ulusu lwesandla ekudibaneni nolwelo oludlekayo, qinisekisa ukusebenziseka kwakhona, kwaye uqinisekise ukuba izandla zakho neempahla zomile.Iinjongo ezininzi:Inokusetyenziswa eKhitshini yokuCoca, ukuhlamba izitya, ukuvasa iCAR, ukucocwa ngaphakathi nangaphandle, ukunqanda ukudibana kolusu lwesandla ngolwelo oludlekayo.Uyilo oluchasene nokutyibilika: Isuntswana lesundu kunye nomnwe ...
Iiglavu zasekhaya eziphinda zisetyenziswe, iiglavu zokuhlamba izitya zerabha, ukutyeba okongeziweyo, imikhono emide, ukuCocwa kweKhitshi, ukuSebenza
IZICELO EZINJONGO EZININZI-Igqibelele ekuhlambeni izitya, ukugcinwa kwamachibi, ulungiselelo, ukucoca (umzekelo, ukutya okuziinkozo), imoto/ukuhlamba amalaphu, ikhitshi/igumbi lokuhlambela usebenzisa, ukusebenza, ukupeyinta, ukwenza igadi, ukuloba, ukukhathalela izilwanyana zasekhaya, imisebenzi yemihla ngemihla, iDIY kunye nayo nayiphi na imisebenzi yasekhaya.IMATERIAL-Yenziwe ngerabha ebhetyebhetye kakhulu engangenwa manzi ukuze ithuthuzeleke kakhulu kunye nobuchwephesha.I-Anti-slip embossed palm ukwenzela ukubamba okugqwesileyo.Babenuka irabha kunye nekhemikhali-efana nekhemikhali xa uqala ...
I-Kitchenware Iiglavu zeRubha eziLungileyo zoMgangatho we-45cm ubude obungangenwa ngamanzi iiglavu zeRubha
Iiglavu zerabha ezikumgangatho ophezulu zokuhlamba izitya